Tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjær oo ka jawaabay dhaleeceynta Jamie Carragher – Gool FM
Dajiye October 19, 2021
(Manchester) 19 Okt 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa weeraray, halyeeyga Liverpool ee Jamie Carragher, sababa la xiriira hadaladii uu ka sheegay Red Devils.
Jamie Carragher ayaa bayaanno hore ku xaqiijiyay in Manchester United ay u baahan tahay inay la soo saxiixato tababare kale, si ay ugu tartanto koobab.
Manchester United ayaa ku martigelin doonta garoonkeeda Old Trafford, kooxda reer Talyaani ee Atalanta habeen dambe ee Arbacada, si ay u wada ciyaaraan ciyaar qeyb ka ah kulammada wareegga saddexaad heerka group -yada ee tartanka Champions League-ga.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær, wuxuuna yiri:
“Tani aniga iima saameynayso (hadalka Carragher), laakiin dabcan waxaad aragteen faallooyin waqti ka waqti ah.”
“Ma aanan ogeyn waxa uu sheegayo, laakiin dabcan waxaan wajihi doonaa Liverpool sidoo kale Axadda, sidaas darteed Jamie markasta wuxuu raadiyaa waxyaabahn yar yar.”
“Waxaan haystaa qiyamkayga, waxaan haystaa habkii aan u maareyn lahaa, waxaan aaminsanahay naftayda, ilaa iyo inta ay kooxda igu kalsoon tahay, waxaan hubaa in fikirka Carragher uusan taas beddeli doonin.”
Waxaa xusid mudan in Man United ay ku wajihi doonto kooxda martida u ah ee Liverpool, fiidnimada Axadda soo socota, kulammada Isbuuca sagaalaad ee horyaalka Premier League.